Mgbakọ IGLTA zuru ụwa ọnụ nke a ga-eme na Milan October 26-29
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Mgbakọ IGLTA zuru ụwa ọnụ nke a ga-eme na Milan October 26-29
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • LGBTQ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Obodo Milano na -atụ anya ịnabata IGLTA. Ọ ga -abụ ohere pụrụ iche ịnabata obodo LGBTQ+, ịnya ụgbọ ala na ike dị mma na ụlọ ọrụ njem. Milano ga -egosipụta omume ya gụnyere, na -enyere ndị obodo aka ime oge ọ bụla nke IGLTA ahụmịhe Milanese pụrụ iche.
Ndị otu njem LGBTQ+ International ga-alaghachi Europe na mmemme izizi ya na Ọktọba 26-29, 2022.
Mgbakọ a, mmemme izizi na ịkparịta ụka n'Ịntanet maka njem nlegharị anya LGBTQ, ga -abụ mgbakọ ọgbakọ mbụ na Europe kemgbe Madrid na 2014.
Emebere mmemme ahụ maka 2020, mana ekwesịrị ịhazigharị ya n'ihi ọrịa COVID-19.
Ndị otu njem LGBTQ+ International ga-eweta Mgbakọ Mba Nile nke 38 ya na Milan, 26-29 Ọktoba 2022. Mgbakọ ahụ, mmemme izi ihe na ịkparịta ụka n'Ịntanet maka njem LGBTQ+, ga-abụ ọgbakọ ọgbakọ mbụ na Europe kemgbe ọgbakọ Madrid na 2014. Ihe omume a bụ na mbụ. atọrọ maka 2020, mana ekwesịrị ịhazigharị ya ọzọ n'ihi ọrịa na -efe efe.
"Obi dị anyị ụtọ na anyị mechara nwee ike mee mmemme ogologo oge na -aga nke ọma na Italytali, na igosi Milan, obodo nnabata LGBTQ+ kachasị mma na mba ahụ," IGLTA Onye isi ala/onye isi ala John Tanzella. “Ọ bụ ezie na yigharịrị oge ahụ na -akụda mmụọ, ogbako nke ga -apụta ga -aba uru karịa maka ebe anyị na ndị otu anyị. Mgbakọ a ga -elekwasị anya na atụmatụ azụmaahịa yana ohere netwọkụ iji kwado ọganiihu ụlọ ọrụ anyị n'ọdịnihu. ”
Atụmatụ IGLTA nke Italy nọ n'ọrụ kemgbe afọ atọ na mmekorita ya na ENIT (Italian National Tourist Board), the Obodo Milan na AITGL (Ndị otu Italiantali nke LGBTQ+ Njem Nleta), ga -eme na UNAHOTELS Expo Fiera Milano. Mgbakọ zuru ụwa ọnụ ga-agụnye ebe a na-azụ ahịa/onye na-ebubata ya, na mmekorita ya na Jacobs Media Group nke UK, nke na-egosipụta nhọpụta n'otu n'otu, yana nnọkọ mmụta na mmemme ịkparịta ụka n'Ịntanet.
“Ọ dịtụbeghị mgbe anyị kwụsịrị ikwenye na anyị ga -eweta IGLTA nye Milan, ”Maria Elena Rossi, Onye isi ahịa na nkwalite, ENIT kwuru. “Na 2022, ndị bịaranụ IGLTA ga -achọpụta ihe ọhụrụ na onyinye nlegharị anya anyị yana nkwanye ugwu dị ukwuu na ahụmịhe dị mma nke jikọtara Milan na mpaghara gbara ya gburugburu. Site na mmekorita ya na ndị ọrụ njem nlegharị anya ha na ndị isi echiche anyị nwere ike ijide n'aka na ihe ga -aga nke ọma. ”
Luca Martinazzoli, onye isi njikwa Milano & Partners kwuru, "Obodo Milano na -atụ anya ịnabata IGLTA." "Ọ ga -abụ ohere pụrụ iche ịnabata obodo LGBTQ+, ụgbọ ala na ike dị mma na ụlọ ọrụ njem. Milano ga -egosipụta omume ya gụnyere, na -enyere ndị obodo aka ime oge ọ bụla nke IGLTA ahụmịhe Milanese pụrụ iche. "
Alessio Virgili nke AITGL kwuru, "Mgbakọ a n'Ịtali ga-abụ isi ihe iji gaa n'ihu na ụwa ọhụrụ nke njem ọrịa na-efe efe." “Nkwalite njem LGBTQ+ na ịnabata ihe omume a bụ azụmaahịa pụrụ iche na ohere agụmakwụkwọ maka Italy na ụlọ ọrụ njem mpaghara anyị. Obodo a na -enweta ijeri euro 2.7 site na njem LGBTQ+, anyị na -enwekwa nganga na ihe omume IGLTA ga -enye ụlọ ọrụ anyị ngwaọrụ iji nabata ha nke ọma, yabụ anyị nwere ike ịga n'ihu na -eto ahịa a na Milan na Italy niile. “
Kemgbe 1983, Mgbakọ Mba ụwa nke IGLTA anọwo na listi ga-aga maka ụdị njem nwere mmasị n'ahịa LGBTQ+. Mkpakọrịta a nabatara mgbakọ na-aga nke ọma na mmadụ yana nchekwa na usoro ahụike ka mma na nke mbụ kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro. Mgbakọ zuru ụwa ọnụ nke IGLTA na -enye ndị ọbịa LGBTQ+ njem nlegharị anya sitere n'akụkụ ụwa niile ihe ngosi dị mkpa maka obodo nnabata, gụnyere ndị ndụmọdụ njem, ndị na -ahụ maka njem, ndị na -emetụta ya na ndị nnọchi anya ụlọ oriri na nkwari akụ na ebe njedebe.